ESI TINYE HASHTAG VKONTAKTE - VKONTAKTE - 2019
Esi tinye hashtag VKontakte
N'ihi na hashtags ji arụ ọrụ, ọ ga-ekwe omume ịchọta ọchụchọ ahụ na saịtị ahụ n'ụzọ siri ike, na-ekpochapụ ihe niile na-adịghị mma.
Usoro dum nke ịwụnye hashtag n'ime usoro nke netwọk mmekọrịta dị na VK bụ ihe dị iche na usoro yiri ya na ihe ndị ọzọ.
Biko rịba ama na a na-atụle ụdị akara a ka e tinye ya n'akwụkwọ n'ụzọ nkịtị niile, karịsịa ma a bịa n'obodo. Nke a bụ n'ihi eziokwu ahụ bụ isi ihe nchịkọta akụkọ nke nchịkọta nke na-arụ ọrụ dị mma karịa ịchọpụta ederede na saịtị ahụ.
Na mgbakwunye na iji ihe eji eme ihe, enwere ike ịchọta ihe atụ, dịka ọmụmaatụ, na nkọwa ma ọ bụ nkọwa foto. Ya mere, a pụrụ ịtụle ụdị ngwa ngwa nke ụdị akara a dị ka nke a na-akparaghị ókè.
Iji jiri koodu pụrụ iche, naanị ị chọrọ ntinye ebe ịkwesịrị ịde ya mgbe e mesịrị.
Mgbe na saịtị VK, mepee windo nhazi mpịakọta na mgbidi gị.
Ịnwere ike ịgbakwunye hashtag na post mbụ, site na edezi, na mgbe ị na-ekepụta ọkwa ọhụrụ na ibe.
Họrọ ebe ọ bụla dị mma maka koodu pụrụ iche.
Tinye akara ahụ "#" na mgbe ọ banyere ederede ịchọrọ ịme mkpado.
Mgbe ị na-ede akwụkwọ edemede, i nwere ike iji otu n'ime ụdị nhọrọ abụọ - Latin ma ọ bụ Cyrillic.
Ịtinye ihe odide nke atọ na hashtag na-eduga n'eziokwu na njikọ ejikọtara agaghị arụ ọrụ.
Iji mee ka mkpado okwu dị iche iche, jiri ya na-emesi ike kama ịnọ na-aga n'ihu, iji mepụta okwu nkewa okwu, ma ọ bụ dee okwu ọnụ.
Ọ bụrụ na ị na-eche mkpa ịdebanye aha ndị ọzọ na-enweghị njikọ na ibe ha n'otu ndekọ, megharịa usoro niile akọwapụtara n'elu, ịhapụ njirimara ikpeazụ nke akara na mbụ na otu oghere na-esote "#".
Biko rịba ama na mkpado ndị ahụ adịghị mkpa ka e dee ya naanị n'ime obere akwụkwọ ozi.
Ntube nkuzi nke hehtag. Cheta na iji njikọ ndị dị otú a nwere ike ịdị irè. Ahụmahụ!
Hụkwa: Otu esi etinye njikọ na ederede VKontakte